Wararkii ugu dambeeyey Weerarkii Maxamed Gafaanje. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Wararkii ugu dambeeyey Weerarkii Maxamed Gafaanje.
Wararkii ugu dambeeyey Weerarkii Maxamed Gafaanje.
July 6, 2019 July 6, 2019 admin1804
Magaalada Gawaan oo ah magaalo yar oo 30 km u jirta Magaalo xeebeedka Hobyo ayaa maanta waxaa lagu weeraray Maxamed Gafaanje ayaa sanadihii dambe ku sugnaa degmada Hobyo iyo nawaaxigeeda.
Gafaanje ayaa ka badbaaday weerarkaas oo ay ku qaadeen Maleeshiyo beeleed ka soo jeeda Koofurta Gaalkacyo, waxaana weerarkan ku dhintay saddex ka mid ah ilaaladiisa. Waxaana weerarkan lala xariirinayaa aano qabiil.
inkastoo xeeldheerayaasha dhanka ammaanka ay muujinayaan in dhacdadaan lagu qaarajin rabay Mr Gafaanje ay suurtogal tahay in ay la xariirto howlgal lagu soo afjarayo hogaamiyayaashii Burcadbadeeda Soomaaliya, Sidan oo kale maleeshiyo kasoo jeeda Koofurta Gaalkacyo ayaa 18 May 2019 ku dilay deegaanka Docol Maxamed Cabdi Garaad oo ahaa Hogaamiye Burcadbadeed kasoo jeeda Puntland, ninkaas oo xili habeen ah jidka u galeen Maleeshiyo hubeysan.
Sidoo kale dadka qaar ayaa aaminsan in falkaan maanta ka dhacay Gawaan lagu qalqal galinaayo Shirweynaha beesha Habargidir uga furmaayo 15 bishan magaalada Hobyo, Wadada maanta falku ka dhacay ayaa ah halka inta badan maraan gaadiidka u socdo Hobyo ee ka yimaada Gaalkacyo iyo Cadaado.
Ciidamada Xoogga Dalka oo maanta ku baxay halkii falku ka dhacay ayaa ku guuleystay in ay xaaladda dajiyaan, waxayna Hogaamiye Gafaanje iyo meydka ilaaladiisa geeyeen Magaalada Hobyo, Xaaladda ayaa Caawa dagan, waxaana howsha xalinta arintan la wareegay Saraakiisha ammaanka iyo Odayaasha Beesha Habargidir ee ku sugan Degmada Hobyo.
Kheyre oo Dhuusamareeb kula kulmay Ganacsatada ka soo jeeda Galmudug